Ederede Robby Slav on Martech Zone |
Edemede site na Robby Ogbugbu
Robby Sla Sla bụ ọkachamara na arụpụta ọrụ. Ọ na-elekwasị anya na-enyere òtù na ndị mmadụ aka ịrụ ọrụ nke ọma, na-arụ ọrụ nke ọma na afọ ojuju karịa na ọrụ. Robby bụ onye na-ewepụta oge niile na ọtụtụ akwụkwọ akụkọ mpaghara yana agba ajụjụ ọnụ site na mbipụta mba dị ka Wall Street Journal. Akwụkwọ ọhụrụ ya bụ Ntụziaka a na-apụghị imeri emeri maka ihe omume IZIR NetworkTA.. Robby na-agba ọsọ a ịzụ ahịa gbasara ịzụ ahịa azụmahịa ụlọ ọrụ.
Nzaghachi nsogbu gị na Social Media na-emebi Ọrụ gị
Saturday, April 20, 2013 Sunday, Eprel 21, 2013 Robby Ogbugbu
Enweghi ụkọ nke mgbasa ozi mmekọrịta n'oge ọdachi ndị mere na Boston n'oge na-adịbeghị anya. Ejiri ọdịnaya Facebook na Twitter gị juputara na ọdịnaya na-akọwa ihe omume nkeji na nkeji. N'ezie, ọtụtụ n'ime ya agaghị enwe isi ma ọ bụrụ na a gbara ya gburugburu. Enweghikwa ụkọ nke ndị na-ahụ maka mgbasa ozi mgbasa ozi na-elekọta mmadụ bụ ndị kpara àgwà kachasị mma n'oge nsogbu. Stacy Wescoe dere, sị: “Ekwesịrị m ịkwụsị onwe m ma kwuo, sị, 'Ee e, ndị mmadụ adịghị
Omume Ndebanye aha Rant
Wednesday, December 7, 2011 Sọnde, Septemba 30, 2012 Robby Ogbugbu
Laa azụ n'oge opupu ihe ubi, enwere ihe ịtụnanya, nke dị ịtụnanya, ihe ịtụnanya nyere nkwado maka nzukọ dị egwu akpọrọ Express Employment Professionals. Usoro ihe omume ahụ n'onwe ya bụ usoro okwu dị egwu, gụnyere Indy nke Peyton Manning. Ndị ọrụ ahụ mere ihe omume ahụ na-enweghị ntụpọ ma echere m na igwe mmadụ ahụ masịrị ya nke ukwuu. N'ezie, enwere m naanị otu mkpesa - ọ nweghị ihe jikọrọ ya na ụbọchị mmemme ahụ. O di nwute, mkpesa ahụ bụ doozy. Ihe omume a nwere
Tọzdee, Septemba 29, 2011 Wednesday, October 26, 2011 Robby Ogbugbu
Emechara m chọta ezigbo ntụnyere zuru oke maka Facebook na Google, yana maka ihe niile mgbasa ozi mgbasa ozi. Facebook bụ ụlọ nnabata, na Google sorority. Ma akụkụ nwoke na nwanyị nke usoro Greek nwere ọtụtụ akụkụ. Tụlee uru ndị a: Camaraderie na ndị enyi ndụ ogologo oge Ndị ọkachamara ịkparịta ụka n'Communityntanet ohere Mmekọrịta obodo n'etiti ndị nwere otu obi Ndị ahụ bụ ụfọdụ n'ime nsogbu nke ịga Greek na kọleji ma ọ bụ mahadum. Ma anyị
Echiche Azụmaahịa: Ndebanye aha Omume Otu Pịa
Wenezdee, Machị 16, 2011 Saturday, October 29, 2011 Robby Ogbugbu
N'ime ụlọ ọrụ na-ahụ maka nrụpụta ọrụ anyị na-agba ọsọ, anyị na-eme ọtụtụ nzukọ ọmụmụ ọha. Anyị na-eme ihe omume ọkọlọtọ nke ahịa: anyị nwere microsite, anyị nwere akwụkwọ ozi email, anyị nwere usoro ndebanye n'ịntanetị. Ma anyị nwere otu echiche anyị na-eche maka ịnwale, ọ dịkwa ntakịrị. Ma eleghị anya, i nwere ike inyere na-agwa anyị ma ọ bụrụ na nke a bụ ezi ma ọ bụ ihe ọjọọ echiche: anyị na-akpọ ya "otu-pịa ndebanye." Lee echiche.
Jim Irsay nke Marketing
Mọnde, Jenụwarị 3, 2011 Sunday, October 4, 2015 Robby Ogbugbu
Na Sọnde, Indianapolis Colts meriri Tenanssee Titans ka ọ bụrụ AFC South Champions. Otú ọ dị, tupu egwuregwu ahụ, onye nwe Colts Jim Irsay gbara mgbasa ozi ahịa zuru oke na Twitter. Ọ bụrụ na ịnọghị na nkọwa ahụ, ka anyị lelee tweets Irsay si Disemba 31st: Imeri A PRIUS NA $ 4K - Na 1: 15 pm nke Sunday a ga-enwe nwa ojii Prius dọwara na ugwu ugwu mputa n'èzí Lucas Oil Stadium… Imeri Ahịa
Ngwaọrụ WordPress: Ndepụta Ndepụta Ndenye
Tọzdee, Disemba 21, 2010 Sunday, Jenụwarị 19, 2014 Robby Ogbugbu
Laghachite na BlogIndiana 2010, anyị mere mkpọsa dị nro maka ngwa mgbakwunye WordPress iji nyere aka mee ka ndị ọrụ rụ ọrụ. A na-akpọ ya Ndepụta Ndepụta Ọgụgụ, ọ dabere na ike a na - enweghị atụ na nke enweghị ịtụnanya. Ndepụta Ndepụta Ndenye blọgụ bụ naanị ihe ọ dị ka ya: ọ na - emepụta ụyọkọ igbe maka iji mee ihe mgbe ị na - ede blọgụ. Chọpụta, ị nwere ike nweta otu ihe ahụ na akwụkwọ Okwu ma ọ bụ biputere ya na ndetu, mana
5zọ ise kacha elu iji bụrụ onye na-atụ egwu
Monday, November 15, 2010 Monday, May 9, 2016 Robby Ogbugbu
Banyere mkparị kachasị njọ ị nwere ike ịnata na isntanetị bụ ebubo na ị bụ onye spammer. Mwakpo ọ bụla na agwa gị enweghị ike ịnọ otu. Ozugbo mmadụ chere na ị bụ onye spam, ị gaghị enwe ike ịlaghachi n'akụkụ ọma ha. Tozọ spamville bụ otu ụzọ naanị. Nke kachasị njọ, ọ bụ ihe ijuanya na ọ dị mfe ịme ihe iji bụrụ onye na-eme ihe n'echeghị ya! Ndị a bụ isi ise
Monday, August 16, 2010 Saturday, October 18, 2014 Robby Ogbugbu
Naanị nsogbu bụ na ozi ịntanetị dị oke mma. Y’oburu n’acho imeputa ihe kariri ọkara ijeri mmadu ndi na-eji email eme ihe na webusaiti, gbanwere onye ahia email nke desktọọpụ. Nke a bụ ihe kpatara ya: